Kungani Us - Huizhou Xinsanxing Lighting Co., Ltd.
Isibani se-rattan sihlanzekile ngokwemvelo, sihle futhi siyakhanya, sihle futhi asishodi ngemibono emisha yezikhathi. Inokusebenza okunamandla nobuciko, futhi iyavumelana nezimo ezahlukahlukene. Akubhekwa njengokuwubukhazikhazi uma kufakwa egumbini elibandayo, futhi akuzizwa kunzima uma kufakwa eHuatang. , Kungashiwo ukuthi abacebile nabampofu balungele abacebile nabampofu, ubuhle nenhlamba kufanelekile, ngakho-ke imikhiqizo ibilokhu ithengiswa kahle.
Kusetshenziswa kabanzi; Ubuciko nokuhlobisa.
Ukubukeka okuhle nombala ofanayo.
Letha inqubo yakho ekhethekile yokuvikelwa kwemvelo.
Thintana noMnyango Wethu we-Pro, Izeluleko nezingcaphuno ezisheshayo zawo wonke amaphrojekthi akho.
Ngomlando omude, iChina inomlando omude, iqala ezikhathini zasendulo, ichuma emakhosini aseTang naseNgomeni, futhi iphumelele eMakhosini aseMing naseQing. "I-Guangdong Xinyu" kaQue Dajun yoQingo Lobukhosi iqukethe: "AmaLattan aseLingnan atholakala kakhulu emhlabeni. Baluka futhi benza i-rattan, kodwa babili kuphela." Ngemuva kwezinkulungwane zeminyaka, sekuguqukile kusuka kumakhono asebenzayo we-rattan weaving kuya kumakhono anamuhla amahle we-rattan weaving. umsebenzi wobuciko.
Nokwelukiweyo Rattan Lamp
Izinto zemvelo ezifana ne-rattan yemvelo, i-phoebe bamboo, i-veneer, njll. I-Rattan, isikhumba sayo sibushelelezi ngombala, sizizwa sibushelelezi, futhi sinobuciko obuhle kakhulu. Kuyinto enhle yokwaluka yemvelo. Isibani se-rattan esenziwe ngalokhu sinobuciko obuhle, izinhlobo ezahlukahlukene, nokuqina, futhi sithandwa ngabathengi kuyo yonke iminyaka.
Ukwaluka kwe-Rattan ngokuvamile kudlula izinqubo ezingaphezu kweshumi nambili ezifana ne-rattan (ukusika amafindo ku-rattan), ukukha i-rattan, ukuwasha i-rattan, ukomisa i-rattan, ukusonta i-rattan, ukudonsa i-rattan (i-rattan yokuhlenga), ukusika i-rattan, i-bleaching, ukudaya, ukuluka, ukudweba, njll.
Ukwaluka kwe-Rattan kusekelwe kakhulu kumagatsha e-rattan, i-rattan core noma i-bamboo, bese ilukwa nge-rattan bark noma i-rattan core encane, enikeza ukudlala okugcwele kuzici zobumnene be-rattan nokumelana nokwephuka.
Ngokuya ngombala, umbala ophuzi okhanyayo we-rattan yoqobo usetshenziswa kakhulu, noma uyacutshungulwa bese ufakwe umbala onsundu ube mhlophe noma ngophondo lwendlovu, othambile nenhle, kanti eminye ifaniswe nekhofi, nsundu, njll. Isibani se-rattan sakhiwe i-rattan ejiyile, ebethelwe futhi elukiwe ngamagxolo e-rattan nomgogodla we-rattan, futhi ekugcineni ipendiwe noma yembala.
Kukulethele ukuthula kwengqondo, qiniseka, ukungabi nankinga nokuzijabulisa.
Ngifuna okuthe xaxa
Kungani ukhetha amalambu alukiwe weXin Sanxing
Ukwamukela izitshalo zokwaluka zemvelo ezifana ne-rattan, uqalo, izitshalo zasemanzini, njll., Kusetshenzwe ubuchwepheshe bokuvikelwa kwemvelo, umkhiqizo ophelile ubukeka kahle, ukufaka umbala okufananayo nokuqina.
Abaculi abangomakadebona abanolwazi olungaphezu kweminyaka engama-20.Abeluki be-XSX Lighting banesipiliyoni seminyaka engama-20 yomsebenzi, futhi amasu abo athambile futhi akhombisa umsebenzi wobuciko.
Kulashwa ngobuchwepheshe obukhethekile bokuvikelwa kwemvelo, akukho okubi.
Ithimba le-XinSanXing linama-master we-9 knitting aneminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni.
I-XINSANXING igxile emakhonweni okweluka futhi ithuthukisa ubuciko bendabuko baseChina.
Ngaphambi kokushiya ifektri, yonke imikhiqizo ye-XSX Lighting izobhekana nokuvikelwa kwemvelo okuqinile, i-anti-isikhutha kanye nokwelashwa okuqinisekisa izinambuzane, ukuhlolwa komswakama, nokuhlolwa ngomhloli okhethekile wokuqukethwe umswakama wezinkuni;
IXINSANXING igcina umswakama wemikhiqizo ingaphansi kwamadigri ayi-14 ngaphambi kokushiya ifektri, ehlangabezana namazinga efenisha nemboni yokukhanyisa;
Ukufakwa komkhiqizo okukodwa: izinhlobo ezingaphezu kuka-20 zemikhiqizo eyodwa zine-1,000, futhi umjikelezo wokulethwa uyashesha.
I-XINSANXING iqinisekisa umjikelezo wokulethwa
Isibani sobuciko se-XSX rattan sihanjiswa ngezingqimba ezi-5 zephepha eliqinisiwe le-kraft, futhi ukufakwa kwangaphandle kugcinwa ngohlaka lokhuni, ukuze ucezu ngalunye luhlale kahle;
Yonke imikhiqizo ye-XINSANXING iqinisekisiwe iminyaka emi-2 ngaphakathi kobubanzi bokusetshenziswa okujwayelekile ngemuva kokushiya imboni. Isiqinisekiso sangemva kokuthengisa siqinisekisiwe;